Biden Oo Booqday Qoyska Ninkii Madowga Ahaa Ee 7-da Xabadood Lagu Tiriyay | Gaaroodi News
Biden Oo Booqday Qoyska Ninkii Madowga Ahaa Ee 7-da Xabadood Lagu Tiriyay
September 4, 2020 | Published by: gaaroodi
Musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ah ee Joe Biden ayaa qadka telefoonka kula hadlay Jacob Blake oo ah ninkii madowga ahaa ee ay booliska dhabarka kaga toogteen magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin taas oo horseedday dibadbaxyo ballaaran.
Mr Blake, oo isbitaalka yaala isagoo curyaan ah ayaa Joe Biden u sheegay inuusan marnaba isdhiibii doonin hadii uu marlabaad cagigiisa ku socdo iyo haddii uu toos u curyaamamaba.
Biden ayaa ka hadlayay kulan ka dhacayay kaniisad ku taalla magaalada ay toogashada ka dhacay. Dhanka kale madaxweyne Donald Trump ayaa isna Talaadadii booqday magaalada Kenosha.
Trump ayaa qiimeyn ku sameeyay burburka soo gaaray goobaha ay saameeyeen mudaaharaadyada gilgilgay magaalada Kenosha kaddib toogashadii Jakob Blake oo ay booliska 7 xabadood dhabarka kaga dhufteen.
Hase yeeshee madaxweyne Trump lama uuusan kulmin qoyska Blake waxa uuna sababta ku sheegay iney doonayen in qareennada ay goobjoog ka ahaadaan boqashadiisa. Gobolka Wisconsin ayaa ah gobol aad muhiim ugu ah doorashada madaxtinimada ee Mareykanka.
Trump ayaa dirayay farriimo isdaba joog oo ah in kala dambeynta magaalada la ilaaliyo hase yeeshee Biden ayaa madaxweyne Trump ku eedeeyay inuu sii hurinayo khalalaasaha ku qotoma midabtakoorka iyo kala qeybsanaanta shacabka reer Mareykan.
Barasaabka gobolka Wisconsin Tony Evers ayaa sheegay inuu door-bidi lahaa ineysan gobolka iman, musharax Trump ama musharax Biden.
Waaxda caddaaladda ee gobolka Wisconsin ayaa hadda baadhitaan ku wadda dhacdada. Waxay mas’uuliyiinteeda sheegeen in askartii falkaas ku lug yeelatay loo diray fasax ku yimid amar dhinaca maamulka ah.